Mhando dzenhetembo, zvese zvaunoda kuti uzive nezvavo | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Nhoroondo yezvinyorwa, Literature, Nhetembo
Usati watsanangura mhando dzenhetembo, zvinodikanwa kutsanangura kuti nhetembo chii. Zve RAE (2020) iri "basa renhetembo kazhinji mundima". Naizvozvo, iwo zvinyorwa zvemarudzi enhetembo, akapiwa mita uye mutinhimira. Kwakatangira kuratidzwa uku kwakadzokera shure kunguva yeGreek Girisi.
Nhetembo yaGilgamesh - yemavambo eSumerian (2500-2000 BC) - ingangove chimwe chezvisikwa zvekare zvakanyorwa. Kune chikamu chayo, chinoenderana nhetembo yakakosha La Odyssey -Homer- kuve imwe yeanonyanyo kuzivikanwa nziyo mumhando iyi. Kubva pamavambo makuru iwayo, Nhetembo dzakashanduka kuburikidza nemhando dzakasiyana dzerwiyo uye zvechinyakare, ine akawanda masitaera ekugadzirisa, madudziro emamodhi, mutinhimira uye mutinhimira.
1 Mhando dzenhetembo maererano netsika dzekumadokero
1.1 Nhetembo yaLyric
1.2 Epic nhetembo
1.2.1 Hunhu hwedetembo
2 Yekutanga mibvunzo kuti uone mhando yenhetembo, zvazvino parameter
2.1 Pfungwa dzakakosha dzekufunga nezvadzo
2.1.1 Assonance rhyme uye consonant rhyme
2.2 Ndima dzehunyanzvi hukuru uye mavhesi ehunyanzvi hushoma
3 Mhando dzenhetembo, kupatsanura zvichienderana nehuwandu hwemavhesi
3.1 Wemavhesi maviri
3.2 Wemavhesi matatu
3.3 Ndima ina
3.4 Wemavhesi mashanu
3.5 Wemavhesi matanhatu
3.5.1 Rakavhunika tsoka kana Manrique couplet:
3.6 Ndima sere
3.7 Wendima gumi
4 Kupatsanura zvinoenderana nekuumbwa kwayo
4.0.6 Vhesi yemahara:
4.1 Dzimwe mhando dzeanonyatsozivikanwa enhetembo
Mhando dzenhetembo maererano netsika dzekumadokero
Mabasa enhetembo dzenhepfenyuro akaumbwa kuti ange achidzokororwa pamwe chete nembira (ndosaka zita rawo). Munguva dzekare, vaHellen vaimbonyora nhetembo dzinozivikanwa nemutinhimira uye mimhanzi. Kwemazana emakore, kuyanana uku kwave kuchishandiswa nanyanduri kuburikidza nekushandisa zvirevo (alliteration, semuenzaniso).
Nhetembo dzerwiyo dzinoratidza "zvakadzama" zvemunyori, pamwe nemanzwiro erudo kana hushamwari. Iwo anowanzo kuve madetembo mapfupi (mazhinji emazita makuru mumhando iyi mahoneti). Kunze kwaFrancesco de Petrarca (1304 - 1374), vanonyanya kurangarira nhetembo dzemimhanzi vakazvarwa mukati mezana ramakore rechi1808: José de Espronceda (1842 - 1836) naGustavo Adolfo Bécquer (1870 - XNUMX).
Icho chinyorwa chakagadzirwa zvakanyanya kuti chiimbwe pane kudzokororwa. Kufanana neratidziro zhinji dzenhetembo, nhetembo dzinotyisa dzakatanga mukare Girisi. Mumiriri wayo ane mukurumbira aive HomerKunyangwe zvisingaite kusiya mazita akaita saHesiod kana munyori wechiRoma Virgil.
Iyo nyaya inoiswa munguva iri kure; zuva racho harigone kutaurwa.
Iwo mavara akareba, akapatsanurwa muzvitsauko zvinonzi nziyo.
Misoro yechinamato (Dzidzisokana pfungwa (Aeneid).
Iye anowanzo sanganisa akajeka ndima ane chaiwo zvinhu.
Chinangwa chayo ndechekusimudzira hondo (nziyo dzekukunda uye hushingi) kana nhoroondo dzezvakamboitika.
Yekutanga mibvunzo kuti uone mhando yenhetembo, zvazvino parameter
Ine mavhesi mangani mudanho rega rega?
Mangani metric syllables yainayo mundima imwe neimwe?
Ndechipi mhando yenyaya (izwi kana izwi rinoreva)?
Pane here imwe mhando yekuwirirana uye / kana cadence pakati pemavhesi?
Ndima idzi dzakasanganiswa sei mudanho rega rega? (Metric hunhu).
Assonance rhyme uye consonant rhyme
Kuti uone mhando yenziyo, zvakakosha kuti utarise kune syllable yekupedzisira yakasimbiswa yendima yega yega. Kana chete mavhawero achienderana, rwiyo runofungidzirwa sedononi (semuenzaniso, candelabra uye zvidimbu). Kune rimwe divi, kana mutambo wacho wakwana - mukurira kwemavhawero nemakonsonendi - mutetetedzo wakanangana; semuenzaniso: anoyemurwa uye anopenya.
Ndima dzehunyanzvi hukuru uye mavhesi ehunyanzvi hushoma
Musiyano mune ino kesi uri nyore, ingoverenga huwandu hwemasirabhu emetric aripo mundima yega yega. Kana iyo huwandu hwakakura kupfuura masere, inoiswa seyakakura vhezheni vhezheni. Kune rimwe divi, kana huwandu hwemashiripiti huri sere kana kuti pasi, inonzi hunyanzvi hwevhesi.
Mhando dzenhetembo, kupatsanura zvichienderana nehuwandu hwemavhesi
Rakaumbwa nendima mbiri (zvisinei kuti ihwo hukuru kana hunyanzvi hunyanzvi kana mhando yerwiyo).
Iyo inoumbwa nendima nhatu dzehunyanzvi hukuru uye nziyo yekonsonendi.
Inoumbwa nendima nhatu dzounyanzvi hushoma nenziyo yekonsonendi.
Zvakafanana neyechitatu, kunyangwe iine assonance nhetembo.
Yakagadzirwa ina ndima dzehunyanzvi hukuru, konsonendi rwiyo mune ese iwo.
Iyo inoumbwa nemavhesi mana eudiki hunyanzvi ane konsonendi rhyme.
Inoumbwa nemavhesi mana ehunyanzvi hukuru (kazhinji hendecasyllables) nemakonsonendi uye mamwe maimhanzi (ABAB scheme).
Inoumbwa nendima ina dzounyanzvi hushoma (kazhinji masiraidhi masere) ane konsonendi yenyaya (abab scheme).
Yakaumbwa ina ina-syllable ndima dzekonsonendi nhetembo.
Iyo ingangoita ndima ina dzeAlexandria dzine nhetembo dzakabatana.
Inoumbwa nendima shanu dzehunyanzvi hukuru nemakonsonendi akadii mune ese iwo, uko pasina anopfuura mavhesi maviri akateedzana aine mutinhimira wakafanana.
Iyo inoumbwa nendima shanu dzounyanzvi hushoma uye musiyano wemakonzonendi rhyme scheme.
Inopa mavhesi maviri anokwanisa kubvunzwa pamwe nemavhesi matatu anoteedzerwa aine nhetembo.
Rakavhunika tsoka kana Manrique couplet:
Yakagadzirwa nendima dzounyanzvi hushoma uye nziyo yekonsonendi.
Inopa ndima sere dzehunyanzvi hukuru uye nhetembo yakanangana.
Iyo inoumbwa nendima sere dzounyanzvi hushoma mune yakasarudzika konzonendi rwiyo.
Icho chimiro chemavhesi eunyanzvi hushoma uine konzonendi kana dudziro rhyme, maererano nekuravira kwemunyori. Kurongeka kwemitambo kunochinja.
Zvino, chirongwa chinonyanya kuzivikanwa abba.accddc (ine nguva mumutsara wechina) uye inoenderana neyegumi spinel. Iko kuumbwa kwakakurumbira naVicente Espinel, saka izita raro. Kune rake divi, Miguel de Cervantes naFélix Lope de Vega, vanoyemurwa neruzha uye kutaura kwezvikamu zvakawanikwa nespinel, zvakashandawo sekuparadzira fomu iyi yenhetembo.
Kupatsanura zvinoenderana nekuumbwa kwayo
Inosanganisira gumi nemana hendecasyllable ndima ine konsonendi yenziyo. Quartet maviri uye matatu matatu, kuti zvive chaizvo. Kugoverwa kwaro ndekwe: ABBA ABBA CDC CDC. Nhasi zvakawanda zvakasiyana zvinogona kuwanikwa mune izvi, kusanganisira izvo zvevanyori vakadai saRubén Darío. Rudzi rwenhetembo urwu rwakatanga muItari nevanyori vakaita saPetrarca naDante Alighieri.
Icho chirevo chedetembo chine huwandu husingaverengeki hwemavhesi ehendecasyllable. Iko vaviri vacho vanoratidza assonance mutinhimira uye iwo asinganzwisisike akasununguka. Nyanzvi zhinji dzinotaura kuti kudanana kune isingazivikanwe - kwakakurumbira mavambo.
Icho rudzi rwe nhetembo ine chiratidzo chakatarwa cheArabic, chakasiyaniswa nekwaya yayo yekutanga yemitsetse miviri kana mitatu iyo nhetembo nevekupedzisira vhezheni yacho. Pane rimwe divi, huwandu hwayo hwemavhesi hunosiyana uye panogara paine matatu monorhythmic ndima mudanda.
Iyo mhando yekuumbwa yakafanana neZéjel, mutsauko kuvapo kwayo kweoctosyllabic kana heptasyllable ndima. Izvi zvidimbu zvakadzika midzi mutsika yeKisimusi.
Inoumbwa neyakaganhurirwa nhevedzano yemakonikoni heptasyllables kana hendecasyllables (inogona kusanganisira mavhesi ega ega). Iyo inosiyaniswa nehurefu hwayo hupfupi pakati pemavhesi enhetembo.
Iwo mabasa ane echinyakare dhizaini isina kubva pane zvakajairwa metric parameter. Zvino, kusavapo kwenziyo nenziyo hazvireve hazvo kuti vanoshaya mutinhimira.
Dzimwe mhando dzeanonyatsozivikanwa enhetembo
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » Mhando dzenhetembo
Stalin Towers akadaro
Kwakanyanya kuratidzwa, kwakazara kwazvo uye kunoshamisa, kunyanya kwakakosha, kune vanotanga, sezvandiri.
Pindura Stalin Torres
Ipfupi nyaya: izvo zvavari, hunhu uye maitiro ekunyora imwe